Jaaliyadda Beesha Axmed Harti ee Gothenburg -sweden oo yeeshay Kulan looga Hadlayay Arrimaha Beesha iyo Marxaladaha Gudaha Dalka gaar ahaan Puntland. | raascasayrmedia.com
← Ciidamo ka tirsanaa Ahlu Suna oo ku biiray Dooxada Shabelle
Ciidamada Mariiniska ee Holland oo dilay burcad badeed Somali ah →
April 3, 2011 · 7:07 pm
Jaaliyadda Beesha Axmed Harti ee Gothenburg -sweden oo yeeshay Kulan looga Hadlayay Arrimaha Beesha iyo Marxaladaha Gudaha Dalka gaar ahaan Puntland.
Kulankan oo ahaa mid si heer sare ah loo soo agaasimay ayaa waxa uu ka dhacay Magaalada Goteborg ee Caasimada labaad Sweden. Waxana ka soo qaybgalay qaybaha kala duwan ee Bulshada Beeshada sida Waxgaradka,Culima´udiin,Aqoonyahno,Dhalinyaro,Haweenka .
Kulankan ayaa sidoo kale waxa ka mid ahaa marti sharaftii ka soo qaybgashay Gudoomiyaha Jaaliyadda Puntland ee Italy islamarkaasna ahaa saxafi rug cadaa ah oo ka soo jeeda Degaanada Puntland.
C/laahi Maxamed Hassan oo ahaa Xiriirayaha iyo isu duwaha Barnaamijka ayaa furay Munaasabada isaga oo ka hadlay ujeedada kulanka tasoo uu ku sheegay inay tahay falanqeyn xaaladihii dalka sida abaaraha, siyaasada, iyo horumarka dalkii gaar ahaan Degaanada Puntland ee Beeshu degantahay.
Siciid Axmed Siciid oo ka mid ahaa Gudigga Qabanqaabada kulanka oo hadalka lagu soo dhoweeyay ayaa u mahadceliyay dhamaan ka soo qaybgalayaasha sida wanaagsan ee usoo ajiibeen casumaadooda, isaga oo hoosta ka xariiqay in kulamada noocan ah yihiin kuwo muhiim ah oo mar kasta loo baahan yahay wada tashi iyo iska warqab. Waxaa isna sidoo kale ka hadlay Mohamed Dacar Oo sidoo kale isna ka hadlay arima badan.
Cawaale Jaamac Salaad Gudoomiyaha Jaaliyadda Puntland ee Italy oo Munaasabadda ka hadlay ayaa halkaasi ka so jeediyay khudbad aad u wanaagsan oo u badneyd wacyigelin iyo talooyin ku socda Jaaliyadda , sidoo kale gudoomiyaha ayaa ka sheekeyay marxalada iminka uu ku suganyahay dalkii, khudbadii gudoomiyaha ayaa ahayd mid si weyn usoo dhoweyeen kasoo qaybgalayaashii kulanka.
Caaqil Maxamed Nuur Cali oo ka mid ah waxgaradka Beesha iyo Odayaasha Reer Puntland ee mudada badan qurba joogta ahaa ayaa Munaasabada ka soo jeediyay Khudbad dheer oo talo iyo tusaale u badneyd, caaqilka ayaa sidoo kale ka sheekayay taariikhda guud ahaan degaanada puntland, sidoo kale waxa uu kula dardaarmay dhamaan dhalinyaradda iyo jaaliyadda inaan dalkii la ilaawin oo la muujiyo waxqabad iyo isku duubnaan.
Cabdiqani Barre Hassan oo isaguna ka mid ah waxgaradka iyo odayaasha Reer Sweden ee kulanka ka hadlay ayaa halkaasi ka sii jeediyay khudbad dheer oo si weyn ula dhaceen kasoo qaybagalayaasha. Waxyna ahayd khudbadiisu in isku xirnaan gudaha iyo dibadda ah la sameeyo si looga warqabo xaaladihii dalka sida abaaraha hada ka jira wadankii guud ahaan.
Dadkii kulanka ka hadlay waxa kale oo ka mid ahaa Ahmed Aadan Muuse oo ka mid ah waxgaradka sidoo kale waxa ka hadlay kulanka akhyaar badan.
Ayaan ahmed hassan iyo Faadumo taar oo ku hadlayay magaca Haweenka ayaa soo badnhigay sida wanaagsan ee diyaarka ugu yihiin inay ka qayb qataan halw kasta oo lagu hormarinayo degaanada iyo dadkeenaba.
Falanqeyn iyo dood dheer kadib waxa la garowsady in la dhiso guddi ka kooban 5-xubnood kasoo hogaamin doona danaha Jaaliyadda beesha iyo sidoo kale guud ahaan isku xirka jaaliyaddaha Puntland.
Gudigan 5-xubnood ah oo halkaasi lagu doortay ayaa 3-xubnood waxay yihiin rag halka 2-ka mid ah yihiin dumar, waxayna isugu jiraan gudoomiye,kuxigen,Qasnaji iyo Xoghayn waxaynakal yihiin magacyadooda sidan.
1-Maxamed Dacar Cadeeysay(Gudoomiye)
3-Siciid Axmed Siciid(Xoghayn)
4-Maryan Yasiin idiris(Qasnaji)
5-C/qani Maxamed Saleeban(Madaxa Xiriirka)
Sidoo kale waxa la isku afgartay in la sameeyo Gole lagu Magacaabo Golaha Marjaca kasoo ka kooban 3-xubnood oo kala ah.
1- Caaqil Maxamed Nuur Cali
2- Caaqil Cabdiqani Barre Hassan
3- Caaqil Axmed Aadan Musse
Golahan marjaca ayaa shaqadiisu tahay dhiirigelinta iyo turxaan bixinta halw kasta oo hortaala gudiga jaaliyadda Beesha.
Shirkan oo ahaa mid si wanaagsan kusoo afjarmay ayaa waxa dib loo balamay in dhamaadka bishan April mar kale la kulmo si halkaas looga sii wado hawlaha jaaliyadda iyo sidoo kala soo bandhigida qodobada lau dhaqayo jaaliyadda.